Switzerland - isimo sezizwe ezihlukahlukene athuthukile, okuyinto eyayihlala abameleli bezizwe ezihlukahlukene. Lokhu, kanye nokwenziwa ezindawo abathintekayo imvelo ulimi isimo. Ungafunda kusukela kulesi sihloko ukuthi izilimi ezikhulunywa Switzerland, bajwayelana izici zezwe kanye nabanye abaningi. Ngokushesha kufanele kuphawulwe ukuthi ngaphezu izilimi ezisemthethweni, futhi kukhona eziningi zezigodi kanye nezilimi zezigodi, engabanikazi bephephandaba ingxenye enkulu yomphakathi.
Uma sikhuluma lulwimi luni idumile kakhulu eSwitzerland, kuba Yiqiniso, isiJalimane. Iningi labantu isimo uhlala cantons (iyunithi zokuphatha), lapho khona kukhulunywa, noma kunalokho ku nezilimi zalo Swiss.
Nokho Lolu limi kuvamile ingasaphathwa, futhi kuso okhuluma ngo cantons ezine abakhuluma isiFulentshi, esisogwini olusentshonalanga yezwe, okusho endaweni wamaRoma. Lezi zindawo yilezi Jura, eGeneva Vaud Nevshantel. Ngaphezu kwalokho, cantons ezintathu abahlala letimbili labantu, lokhu Bern, Valais futhi Fribourg.
Izilimi ezisemthethweni Switzerland lihlanganise Italy. Ngisho naphezu kweqiniso lokuthi kukhona ke ukusabalala okuncane kakhulu, wabonwa njengenhlangano esemthethweni. Isetshenziswa Italy e Canton Ticino futhi ngokuthi ezinye ezifundazweni eziseningizimu ye-Canton of Graubünden.
Kunabo bonke e-Switzerland bomdabu abalukhulumayo. Inombolo yabo idatha ezahlukene zokhahlamba kusuka 0.5 kuya 0.6% abantu sebebonke isimo. Romansch ukhuluma kuphela Grisons Canton, okuyinto ezihlala abathwali Italian nesiJalimane. Sekukonke kukhona sub-namaqembu ezinhlanu ulimi, lapho onke akhuluma ulimi olulodwa, okuthiwa Rumantsch Grischun yadalwa.
Izilimi ezisemthethweni Switzerland
Iqiniso lokuthi abaningi kangangokuthi abane izilimi ezihlukile kwezisemthethweni kuleli zwe, ngenxa izici eziningana. Eyokuqala wezifiki. Sekungamakhulu amaningi eminyaka e-Switzerland beba hhayi kuphela izakhamuzi emazweni angomakhelwane nge kungehlisa izinga lokuphila, kodwa futhi izivakashi ezivela eziqhelile. Ngokwesibonelo, yokubala abantu, ekhiqizwa ngo-2000, yabonisa ukuthi cishe 1.4% labantu - kuba izifiki babevela insimu yezwe elaliyiYugoslavia.
IsiJalimane, isiFulentshi, isiNtaliyane futhi romani - ukuthi izilimi ezikhulunywa Switzerland. Nokho, ngokuvumelana umthetho-sisekelo wezwe, ezintathu zokuqala zalezi zilimi abhekwa kazwelonke, nokuthi ukulungele imibhalo uhulumeni, umthetho kanye nokunye. Lokhu kungenxa yokuthi abahlala Switzerland iyinombolo incane kakhulu of abathwali romani ulimi. Noma kunjalo, ngokuvamile ezisetshenziswa emihlanganweni esemthethweni, futhi kungenzeka ukusebenzisa emagunyeni.
Le mithetho zisebenze eziyivelakancane akusho nomuzwa wokuthi sibukelwa phansi. Isebenzisa i "territoriality isimiso", owawuthi imingcele ulimi okumelwe ihlonishwe ezikhungweni ezisemthethweni. Iqiniso lokuthi izilimi ezine ezihlukile kwezisemthethweni lapha, akusho ukuthi wonke umuntu kuleli zwe ungumnikazi kubo.
Ngokuvamile, izakhamuzi Swiss emikhulu, umama ulimi lwabo, ngokwezinga elincane kusuka kwenye isimo nesiNgisi. Ukungafuni ukufunda zonke izilimi isimo kungenziwa nje wachaza iqiniso lokuthi IsiZulu iyathandwa kakhulu emhlabeni wonke, kanye nolwazi lwakhe kuvule okuningi. Lokhu kwenza Switzerland kusukela "chetyrehyazykovoy" e "ezimbili lingual nengxenye" izwe.
Manje ngoba sewuyazi ukuthi izilimi ezikhulunywa Switzerland. Sekuyisikhathi ufunde mayelana nendlela ulimi kunqunywa isimo Canton ngamunye. Iziphathimandla esifundeni ngasinye unelungelo ukuze kunqunywe ukuthi yiziphi ulimi endaweni yabo eyinhloko. Ngokwesibonelo, cantons abakhuluma isiFulentshi Ukhetha ukufunda ezikoleni isiJalimane, futhi okuphambene nalokho. Njengolimi lwesibili angaphandle kuleli cala ukhonza English noma wase-Italy. Futhi Italian ekhuluma Canton of Tichila, isibonelo, kuhlolwa German nesiFulentshi Kuphoqelekile.
State VS IsiZulu
Isitatimende induna ikhanda kwetinhlavu omunye cantons, wenza ngo-2000, liye wagxeka ngoba efuna ukusungula ulimi lokuqala wesinye isizwe ungumthombo isiNgisi, ngakho-ke, umphakathi kungaba ulimi kule ndawo yayiswa isikhundla yesibili. Isikhulu Wabhekisela eqinisweni lokuthi IsiZulu landile emhlabeni, abafundi esikhathini esizayo luyofika Ukugunda ezingaphezu kuka-French. Abaphikisi emisha sinqume ukuthi ushintsho olunjalo kungaholela Ukuwohloka ubumbano lukazwelonke yezwe.
Eqinisweni, kunzima ukusho ngezilimi eziningi kanjani olusemthethweni eSwitzerland, ngoba iyikhaya kwakungenza abantu bezizwe abaningi, ebangela ngo 9% njengoba amaphesenti. Lesi sibalo kushintsha njalo nge ukuthutheleka kwababaleki entsha. Lokhu kwenza kube nakakhulu kunzima ukunquma izilimi ezikhulunywa Switzerland.
Amathiphu ambalwa sendlela ukususa i-plug-sulfuric kusukela indlebe ngokwakho